Shiinaha Bougainvillea Spectabilis Ubaxa Tree warshad dhirta bannaanka iyo soo saarayaasha | Ubaxa Qoraxdu
Bougainvillea Spectabilis Geed Ubaxa Geedka Bannaanka
Bougainvillea waa geed yar oo weligiis cagaaran oo leh ubax cas oo dhalaalaya. Nooca ubaxa ayaa ka weyn. 3dii brade kasta waxay soo ururiyaan ubax yar oo saddexagal ah, sidaa darteed waxaa sidoo kale loo yaqaan ubax saddex-xagal. Waxay ku habboon yihiin beeritaanka beerta ama daawashada dheriga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa bonsai, hedgerow iyo jarista. Bougainvillea waxay leedahay qiime qurxin sare waxaana loo isticmaalaa sida ubax fuulashada derbiyada koonfurta Shiinaha.
Cabirka la heli karo: 30-200cm
Baako & Gaarsiin:
Baakadaha: kiisaska alwaaxda ama qaawan
Macnaha Gaadiidka: Badda
Waqtiga hogaaminta: 7-15 maalmood
Bixinta: T / T 30% ka hor, dheelitirnaanta nuqulada dukumiintiyada dhoofinta.
Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka bougainvillea waa 15-20 digrii Celsius, laakiin wuxuu u adkeysan karaa heerkulka sare ee 35 darajo Celsius xagaaga wuxuuna ilaalin karaa jawi aan ka yarayn 5 darajo Celsius xilliga qaboobaha. Haddii heer kulka uu ka hooseeyo 5 darajo Celsius muddo dheer, waxay u nuglaaneysaa qabowga iyo caleemaha dhacaya. Waxay jeceshahay cimilo diiran oo qoyan oo aan qabow u adkaysan karin. Waxay ku badbaadi kartaa jiilaalka si nabadgelyo leh heerkul ka sarreeya 3 ° C, oo ubax kuleylka ka sarreeya 15 ° C
Bougainvillea wuxuu jecel yahay iftiinka waana ubaxyo wanaagsan. Iftiinka oo aan ku filnayn xilliga koritaanka wuxuu horseedi doonaa koritaanka daciifka ah ee dhirta, oo saameynaya burooyinkeeda uurka iyo ubax. Sidaa darteed, geedo yaryar oo aan cusbooneysiin sannadka oo dhan waa in la dhigaa marka hore hooska semi-hooska. Waa in la dhigaa hortiisa daaqadda koonfurta u jeedda xilliga jiilaalka, waqtiga qorraxduna waa inuusan ka yarayn 8 saacadood, haddii kale caleemo badan ayaa u nugul inay muuqdaan. Ubaxyada maalinlaha ah, waqtiga iftiinka maalinlaha ah waxaa gacanta lagu hayaa qiyaastii 9 saacadood, wayna soo kori karaan oo ubaxsan karaan bil iyo bar kadib.
Bougainvillea waxay doorbideysaa ciid yar oo aashito leh oo dabacsan oo waxtar leh, iska ilaali biyo qulqulka. Markaad dherjinayso, waxaad isticmaali kartaa hal qayb oo mid kasta oo caleenta caleenta ah, ciidda peat, ciidda bacaadka ah, iyo carrada beerta, kuna dar qadar yar oo ka hadhay keegga dillaacay sida bacriminta aasaasiga ah, iskuna qas si aad uga dhigto carro wax lagu beero. Dhirta ubax waa in dib loo rogo oo lagu beddelo carro sanadkiiba hal mar, wakhtiguna waa inuu ahaadaa ka hor biqilka horraanta gu'ga. Markaad dib u soo celineyso, u isticmaal maqas si aad u gooyso laamo cufan iyo cows.
Biyaha waa in la waraabiyo hal mar maalintii guga iyo deyrta, iyo hal mar maalintii subixii iyo fiidkii xagaaga. Xilliga jiilaalka, heer kulku wuu hooseeyaa dhirtiina waxay ku sugan tahay xaalad hurdo ah. Waraabinta waa in la xakameeyo si carrada dheriga loogu hayo xaalad qoyan.
Hore: Bougainvillea Bonsai Plant Ubax
Xiga: Hal Jir ah Pachira Macrocarpa Foliage Bonsai Dhirta
Geed Ubax Bougainvillea